Okigbo Ojoto - Igbo News | News in Igbo Language
Aug 30, 2021 - 16:59 Updated: Aug 30, 2021 - 18:12
Ọnwụ emeela ụwa ihe
Isi dara n'akaghị aka
Ọ bụ gịnị ka a na-ekwu?
Okigbo Ojoto alaala mmụọ
Ezi nwa idoto ejebe obodo afụdobe.
Chaị, ihe mere n'Ojoto
Mmiri Idoto ebegbuo onwe ya n'akwa
Ọ bụzịkwà Idoto ka a na-akwọrọ, ka ọ bụ anyammiri ya?
Ịhụnanya nne na nwa.
Ọ bụ ezie na ihe a emeghị taa
Mana anyammiri ya ka dị ụwa n'anya taa
Maka na ọ na-abụ ụzụ tụọ n'ili dike
Ọha mmụọ na ọha mmadụ anụ ísì ozu ya.
Ọ bụ gịnị ka a na-ekwubedị ihe a?
Oke osisi Ojoto adaala
Ụmụ nnụnụ wee fesàá
Okpuru ọtọsị adaala òwù
Ụkpaka Ojoto na-ebezịkwa akwa
Onye ga-agụgụ ya obi?
Chaị! Ihe ọnwụ mere.
Okigbo Ojoto, odogwu nwoke
Agụ mere ìrè na ihe ukwu tupu ọ laa mmụọ
Ọ bụ akwụkwọ i dere ede?
Nke ụwa agaghị agụcha agụcha
Ọ bụ nzọụkwụ dimkpa gị?
Nke mmiri agaghị amacha amacha?
Ka bụ ọgụ ị lụrụ àlụ dịka nwoke
Ma jiri ndụ gị chụọ àjà
Maka nnwereonwe nke mmadụ.
Nwadibịa loro obi ebule abụghịzị obere dibịa
Gbachibido gbachibido bụ maka anụ ala
Maka na a naghị agbachibido anụ elu agbachibido
Okigbo Ojoto bụ anụ elu
Ụwa apụghị ịgbachibido gị
Ọbụladị ma n'ọnwụ
Ude gị ka na-ede.
Ọ na-abụ akpịrị gụọ mmanwụ
Ọ dị ka a kọrọ ya ọgwụ
Maka na e bugharịba ozu diochì ebe niile o tere nkwụ
Ị mara na ozu ya ga-ereka n'isi ndị bu ya
Chaị! Isi dike dara
Mana aja danyere n'olulu eruola ikwunne ya
Ncheta ka anyị ji abịa
Ụfọdụ dịkwa ka ha ọkà bù anyammiri n'anya
Mana a gaghị eji na ụtaba na-agba anyammiri wee kwụsị ịkpọ ya akpọ.
Ihe ala rìrì àkárịá
Ya dịba, maka na ụwa a bụ ahịa
Onye zụchaa nke ya, ọ laba
Christopher nwa Okigbo ladị mma
Ụbọchị nkwọ ka anyị zụkọọ ọzọ n'ọhà mmụọ
Maka na ije ọgụ abụrụla ndeeri
Okigbo Ojoto ladị mma.
©Izunna Okafor, 2021.